Jessie Leggings ကို PDF အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ - အဆိုပါ Tailoress
နေအိမ် / အမြိုးသမီးမြား / ဘောင်းဘီရှည် / Leggings / Jessie Leggings ကို PDF အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 5.00 ထဲက5based on 1 customer rating
ဒါကတကယ့်ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါနှစ်ဦးခြေထောက်ချုပ်တသာအတွင်းခြေထောက်နှင့်အတူထည်၏အပိုင်းအစနှင့် crotch ချုပ်ရိုးကနေဖြတ်နေကြတယ်. ပင်မရှိ waistband ရှိပါတယ်! ဒါဟာ leggings ရဲ့ထိပ်ကဆင်းလှိမ့အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး.
အလျင် leggings လိုအပ်ပါတယ်? ဒီ deifinitely သင့်ရဲ့ပုံစံဖြစ်ပါသည်!
SKU: 1123 categories: Leggings, ဘောင်းဘီရှည်, အမြိုးသမီးမြား Tags:: leggings, နွေရာသီ, ဘောင်းဘီရှည်, အမြိုးသမီးမြား
အလျင် leggings လိုအပ်ပါတယ်? This is definitely your pattern!
အရွယ် / လက်စသတ်တိုင်းတာခြင်းများ:
ခန့်. 1m 25mm wide elastic
Copyshop အရွယ်အစား: 70cm x 115cm
1 review for Jessie Leggings ကို PDF အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော5ထဲက 5
Marcella (verified owner) – မေ 8, 2016
အမိန့်အပြီးတကယ်အလျင်အမြန်ပုံစံရရှိထားသည့်နှင့်ဤ leggings တက်အောင်ဘယ်လောက်လွယ်ကူကိုချစ်.